Ikhabethe lezwe elihle nelithokomele
Le Khabhinethi enhle ihlezi kumahektha angu-2 wephayini ye-ponderosa amahora amabili kuphela ukusuka e-Scottsdale, e-Arizona. Itholakala ezweni elihle eliwunqenqema leCoconino National Forest kunendawo yomndeni omkhulu, izindlela ezingapheli zokucwila ngaphandle, futhi ihora kuphela ukusuka e-Majestical Sedona. Jabulela ukubukwa okuvela emphemeni omkhulu, izindawo zomlilo zangaphakathi/zangaphandle ezibaswa ngezinkuni, nezindawo ezinhle ongazijabulela futhi uphumule. Impahla ifinyeleleka unyaka wonke ngemigwaqo enakekelwa yisifunda eholela kuthelawayeka.
Ikhabethe lilala ngokunethezeka abayisithupha, elinamakamelo okulala angu-2 (inkosi eyodwa/indlovukazi eyodwa) kanye nesitezi esikhulu esinombhede ogcwele/amawele nendawo eningi yokulahla izikhwama zokulala uma kudingeka. Igumbi lokulala lenkosi liwumpetha elinegumbi lokugezela le-en suite eliphinde libe nobhavu omkhulu we-jacuzzi wokucwilisa kanye nokuhamba ngeshawa. Igumbi lokulala lendlovukazi linethezekile futhi lithulile futhi linokufinyelela kokuhamba ngezinyawo ukuya endlini yangasese ephansi. I-loft nayo inendawo yehhovisi ehlomele kahle yalabo abangakwazi ukubalekela umsebenzi ngesikhathi sokuhlala kwakho. I-crib yokuvakasha iyatholakala uma kudingeka.
Jabulela ukubukwa okumangalisayo ngenkathi uphumule egumbini lokuhlala elikhulu elinodonga lwefasitela oluphakeme lwamamitha angama-20+ kanye nomlilo omkhulu wezinkuni ovuthayo. Ikhishi elihlangene le-gourmet likhulu futhi liqukethe konke ozokudinga ukuze ujabulele ukudla okuphekwe ekhaya okumangalisayo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Uma kudingeka, kunewasha nokomisa endlini yodaka khona kanye ekhishini. Ukubuka kuyaqhubeka kusuka endaweni yokudlela enamafasitela amakhulu nokufinyelela okuqondile emphemeni wangemuva, uma kwenzeka unquma ukujabulela ukudla kwakho ngaphandle.
Kusukela emphemeni ongemuva, ungajabulela ukubuka umndeni wethu wendawo wama-elk nezinyamazane izinyamazane kuyilapho usebenzisa indawo yangaphandle yokulungiselela ukudla ukuze wenze i-BBQ futhi uphumule. Ibhonasi eyengeziwe indawo yomlilo yangaphandle evuthayo izinkuni kanye nendawo yokuhlala ngqo ngaphandle kwe-master suite. Kukhona nesitezi sangaphambili esithokomele lapho umuntu angakhomba khona isihlalo sakhe esinyakazayo ngasentshonalanga futhi abambe ukushona kwelanga okudumile kwase-Arizona.
Inothi elilodwa: Nakuba kunesevisi yeselula endaweni, isevisi ye-inthanethi (i-wifi) ayitholakali. Kulabo okumele bahlale bexhumekile, izivakashi eziningi zithola ukuthi ukusebenzisa izindawo zokudonselana zomuntu siqu kumafoni abo kunikeza ukuxhumana okuku-inthanethi okwanele. Sinomtapo wolwazi omuhle wama-DVD esingawuthola lapho ilanga selishonile.